အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo. (ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၂၀)
COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားပုံနဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံတွေအပေါ် အမေရိကန်နဲ့ တရုတ် ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေအကြား အပြန်အလှန် ပြစ်တင်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဝူဟန်မြို့ ဓာတ်ခွဲခန်းက ထွက်လာတယ်လို့ ပြောနေတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo ဟာ နိုင်ငံရေးကစားနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်ဘက်က စွပ်စွဲနေသလို ဝန်ကြီး Pompeo ကလည်း COVID-19 သတင်းအချက်အလက်တွေ မျှဝေပေးဖို့ တရုတ်နိုင်ငံကို တောင်းဆိုနေပါတယ်။ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် Cindy Saine ရဲ့ သတင်းလွှာကို ကိုရဲမင်းထွန်း တင်ပြပေးထားပါတယ်။
COVID-19 ရောဂါ ဝူဟန်မြို့မှာ စဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်အပေါ်မှာတော့ နှစ်ဖက် သဘောတူကြပုံ ပေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတဲ့ အချက်အပေါ်မှာတော့ သဘောမတူကြပါဘူး။ ဒီဗိုင်းရပ်စ် ဝူဟန်ဓာတ်ခွဲခန်းက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ အထောက်အထားတွေ တပုံကြီးရှိတယ်ဆိုပြီး ဝန်ကြီး Pompeo ပြောခဲ့တဲ့အချက်ကို သတင်းထောက်တွေက မေးရာမှာ...
“ဒီကိစ္စကို တကယ်ပဲ မြန်မြန် ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကို ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လုပ်စရာရှိတာတွေကို တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကပ်ရောဂါမျိုး မထိန်းချုပ်နိုင်လောက်အောင် နောင်မဖြစ်စေဖို့ တခြား ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေ လုပ်နိုင်တဲ့အရာမျိုးပါ။” လို့ Pompeo က ပြောပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ ဘေဂျင်းမြို့မှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ Hua Chunying က Pompeo ရဲ့ စကားဟာ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးကစားဖို့ လုပ်နေတာပါလို့ ပြန်ပြီး စွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်။
“Mr. Pompeo က ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ဇာစ်မြစ်ကို ခဏခဏ ပြောနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အထောက်အထားလည်း တခါမှ မပြဘူး။ ဒါက ရှိမှမရှိတာ။ ဒါက သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ ဆေးပညာကျွမ်းကျင်သူတွေ လုပ်ရမယ့်ကိစ္စပါ။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အနေနဲ့ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအတွက် လိမ်ညာပြောနေတာတွေ ဆက်မလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။”
ဂျာမနီ၊ ဗြိတိန်နဲ့ ဩစတြေးလျတို့ အပါအဝင် တခြား ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကတော့ ဝူဟန်မှာ ကူးစက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပိုပြီး သိချင်နေပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ပြောတာကို တရုတ်တို့ ခွင့်ပြုသင့်တယ်လို့ ဝန်ကြီး Pompeo က ပြောပါတယ်။
“လူတွေ ဘေးရန်ကင်းဖို့ ကျနော်တို့ လိုအပ်နေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို တရုတ်နိုင်ငံက ပေးဖို့ ငြင်းဆန်နေပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေ၊ သုတေသန ပြုထားတာတွေ၊ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလတုန်းက ဖျားနာခဲ့တဲ့ လူနာတွေရဲ့ အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတွေလို သတင်းအချက်အလက်တွေပါ။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို ပထမဆုံး ကူးခံရတဲ့ လူနာအမှတ်ဇီးရိုးအကြောင်း သိချင်သလား ဆိုရင်တော့ မေးနေစရာတောင် မလိုပါဘူး။”
Pompeo က ဒီလို အချက်အလက်တွေ တောင်းပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာဖို့ ပြောနေတာဟာ နိုင်ငံရေးကြောင့် မဟုတ်ဘဲ လူ့အသက်တွေကို ကယ်တင်ဖို့ပါလို့ ပြောပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျဘေး အမရေိကနျနဲ့ တရုတျတို့ အပွနျအလှနျ အပွဈဖို့
COVID-19 ကူးစကျရောဂါ ဖွဈပှားပုံနဲ့ ကိုငျတှယျပုံတှအေပျေါ အမရေိကနျနဲ့ တရုတျ ထိပျတနျးတာဝနျရှိသူတှအေကွား အပွနျအလှနျ ပွဈတငျပွောဆိုနကွေပါတယျ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ဝူဟနျမွို့ ဓာတျခှဲခနျးက ထှကျလာတယျလို့ ပွောနတေဲ့ အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Mike Pompeo ဟာ နိုငျငံရေးကစားနတော ဖွဈတယျလို့ တရုတျဘကျက စှပျစှဲနသေလို ဝနျကွီး Pompeo ကလညျး COVID-19 သတငျးအခကျြအလကျတှေ မြှဝပေေးဖို့ တရုတျနိုငျငံကို တောငျးဆိုနပေါတယျ။ ဗှီအိုအသေတငျးထောကျ Cindy Saine ရဲ့ သတငျးလှာကို ကိုရဲမငျးထှနျး တငျပွပေးထားပါတယျ။
COVID-19 ရောဂါ ဝူဟနျမွို့မှာ စဖွဈခဲ့တယျဆိုတဲ့ အခကျြအပျေါမှာတော့ နှဈဖကျ သဘောတူကွပုံ ပျေါပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျလိုဖွဈသလဲဆိုတဲ့ အခကျြအပျေါမှာတော့ သဘောမတူကွပါဘူး။ ဒီဗိုငျးရပျဈ ဝူဟနျဓာတျခှဲခနျးက ပေါကျဖှားလာတဲ့ အထောကျအထားတှေ တပုံကွီးရှိတယျဆိုပွီး ဝနျကွီး Pompeo ပွောခဲ့တဲ့အခကျြကို သတငျးထောကျတှကေ မေးရာမှာ...
“ဒီကိစ်စကို တကယျပဲ မွနျမွနျ ဖွရှေငျးနိုငျပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ကို ကတိပေးထားတဲ့အတိုငျး ပှငျ့လငျးမွငျသာစှာနဲ့ ဖှငျ့ပေးမယျဆိုတဲ့ ရိုးရိုးရှငျးရှငျး လုပျစရာရှိတာတှကေို တရုတျကှနျမွူနဈပါတီက လုပျပေးနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုကပျရောဂါမြိုး မထိနျးခြုပျနိုငျလောကျအောငျ နောငျမဖွဈစဖေို့ တခွား ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှေ လုပျနိုငျတဲ့အရာမြိုးပါ။” လို့ Pompeo က ပွောပါတယျ။
တခြိနျတညျးမှာပဲ ဘဂေငျြးမွို့မှာလညျး တရုတျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွောခှငျ့ရ Hua Chunying က Pompeo ရဲ့ စကားဟာ ပွညျတှငျးနိုငျငံရေးကစားဖို့ လုပျနတောပါလို့ ပွနျပွီး စှပျစှဲလိုကျပါတယျ။
“Mr. Pompeo က ဗိုငျးရပျဈရဲ့ ဇာဈမွဈကို ခဏခဏ ပွောနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အထောကျအထားလညျး တခါမှ မပွဘူး။ ဒါက ရှိမှမရှိတာ။ ဒါက သိပ်ပံပညာရှငျတှနေဲ့ ဆေးပညာကြှမျးကငျြသူတှေ လုပျရမယျ့ကိစ်စပါ။ နိုငျငံရေးသမားတှေ အနနေဲ့ ပွညျတှငျးနိုငျငံရေးအတှကျ လိမျညာပွောနတောတှေ ဆကျမလုပျဖို့ လိုပါတယျ။”
ဂြာမနီ၊ ဗွိတိနျနဲ့ ဩစတွေးလတြို့ အပါအဝငျ တခွား ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှကေတော့ ဝူဟနျမှာ ကူးစကျမှုဖွဈခဲ့တဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ပိုပွီး သိခငျြနပေါတယျ။ သိပ်ပံပညာရှငျတှေ ပွောတာကို တရုတျတို့ ခှငျ့ပွုသငျ့တယျလို့ ဝနျကွီး Pompeo က ပွောပါတယျ။
“လူတှေ ဘေးရနျကငျးဖို့ ကနြျောတို့ လိုအပျနတေဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှကေို တရုတျနိုငျငံက ပေးဖို့ ငွငျးဆနျနပေါတယျ။ ဗိုငျးရပျဈနဲ့ဆိုငျတဲ့ ဓာတျခှဲနမူနာတှေ၊ သုတသေန ပွုထားတာတှေ၊ ၂၀၁၉ ဒီဇငျဘာလတုနျးက ဖြားနာခဲ့တဲ့ လူနာတှရေဲ့ အသေးစိတျမှတျတမျးတှလေို သတငျးအခကျြအလကျတှပေါ။ ဒီဗိုငျးရပျဈကို ပထမဆုံး ကူးခံရတဲ့ လူနာအမှတျဇီးရိုးအကွောငျး သိခငျြသလား ဆိုရငျတော့ မေးနစေရာတောငျ မလိုပါဘူး။”
Pompeo က ဒီလို အခကျြအလကျတှေ တောငျးပွီး ပှငျ့လငျးမွငျသာဖို့ ပွောနတောဟာ နိုငျငံရေးကွောငျ့ မဟုတျဘဲ လူ့အသကျတှကေို ကယျတငျဖို့ပါလို့ ပွောပါတယျ။
ဝါရှင်တန်က လမ်းနာမည်တခု တရုတ်ဆရာဝန်အမည်ပြောင်းဖို့ လွှတ်တော်မှာ အဆိုတင်ထား